နောင်တကင်းရာသို့ (နန္ဒသိန်းဇံ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » နောင်တကင်းရာသို့ (နန္ဒသိန်းဇံ)
Posted by Good Idea on Jul 28, 2011 in History, Society & Lifestyle |3comments
ဘ၀ အဘိဓမ္မာစာပေတွေ၊ အတွေးအခေါ်စာပေတွေ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒစာပေတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ ဆရာနန္ဒသိန်းဇံရဲ့ ၀တ္ထုကောင်းလေးတပုဒ်ကို လမ်းကြုံလို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေးအခေါ်တခုကို တင်ပြထားတဲ့ ဒီဝတ္ထုတိုလေးက စာဖတ်သူမိတ်ဆွေကို လေးနက်တဲ့ အတွေးတခုခုတော့ ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ် ယူဆပါတယ်။ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
သူပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကြားဖူးပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ ဇာတ်အခင်းအကျင်းက မူရင်းနှင့် အတန်ငယ် ကွဲလွဲနေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်က နားစိုက်ထောင်နေပါတယ်။ သူ့ဇာတ်အခင်းအကျင်းက ဒီလိုပါ။
သဲကန္တာရကြီးကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ခရီးသွားကြမည့် ခရီးသည်တစ်စုဟာ နေ့ အချိန်မှာ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ အတွက် အပူသက်သာတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ နားနေကြတယ်။ သူတို့က ညပိုင်းလထွက်လာတဲ့ အချိန်မှ ခရီးဆက်မယ်လို့ သဘောတူထားကြတယ်။
လထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ခရီးသည်တွေက ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြတယ်။ အဲဒီ ခရီးသည်တွေထဲက လူငယ်တစ်ဦးဟာ ခရီးမဆက်ခင် ခြေထောက်မှာ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရနေတဲ့သူ့ရဲ့ ကုလားအုပ်ကို ကောင်းကောင်းသွားနိုင် မသွားနိုင် စမ်းသပ်တဲ့ အနေနဲ့ အနီးဝန်းကျင်ကို လှည့်ပြီးမောင်းကြည့်တယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းအရောက်မှာ တွင်းကြီးတစ်တွင်းကို တွေ့ တယ်။
ဒါနဲ့ ကုလားအုပ်ပေါ်ကဆင်းပြီး တွင်းကြီးထဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ လရောင်ကြောင့် ပြိုးပြိုးပျက်ပျက်လင်းလက်နေ တဲ့ အရာတွေကို တွင်းကြီးအောက်ခြေမှာ မြင်နေရတယ်။ ဒီလူငယ်က အဲဒီ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် အရာတွေဟာ
အင်မတန် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ စိန်တုံးတွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေလို့ ထင်နေတယ်။
ဒါကြောင့် ကုလားအုပ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီး သူ့ လူတွေဆီကို အမြန်ပြန် လာပြီး တွင်းကြီးထဲက အရာတွေအကြောင်း၊ အဲဒီ တွင်းထဲဆင်းဖို့ရသမျှကြိုးတွေ ယူခဲ့ဖို့ အကြောင်းပြောတယ်၊ ရသမျှကြိုး တွေယူပြီး တွင်းကြီးဆီကို သွားကြတယ်။ စောစောက လူငယ်ဟာ ရသမျှကြိုးတွေကို ဆက်ပြီး အရင်အဦးတွင်းကြီးထဲကို ဆင်းတယ်။ တွင်းက
ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးနက်နေတော့ ကြိုးက အောက်ကို မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အပေါ်ကလူတွေက ကြိုးစားပြီး ကြိုးကိုဆက်တယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ မိမိတို့ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကိုပါ ကြိုးအဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။
မကြာခင် စောစောက လူငယ်ဟာ တွင်းအောက်ခြေကိုရောက်တယ်၊ ရောက်တော့မှ သူထင်ထားတာနဲ့
တကယ့်လက်တွေ့ ဟာ တခြားစီဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရတယ်။ တကယ်က လရောင်ကြောင့် သူမြင်ခဲ့ရတဲ့ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် အရာတွေဟာ စိန်တုံးတွေ မဟုတ်ဘဲ လရောင်ကြောင့် လင်းလက်နေတဲ့ မြွေမျက်လုံးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ ။
ဧရာမမြွေကြီးတွေ တွင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာ စုပြုံနေကြတာတဲ့။ အပေါ်ကနေပြီး တွင်းထဲကို ငုံ့ ကြည့်နေသူတွေကလည်း
အဲဒီ မြွေမျက်လုံးတွေကို တကယ့် စိန်တွေလို့ ထင်ပြီး ဆင်းဖို့ တကဲကဲ လုပ်နေကြတယ်။ အောက်ရောက်သွားတဲ့ လူငယ်က အပေါ်ကလူတွေကို “ဟေး မဆင်းကြ နဲ့ … စိန်တွေမဟုတ်ဘူး၊ မြွေတွေ … မြွေတွေ…” လို့ လှမ်းအော်ပြောတယ်။
ဒီလိုအော်တာကို အပေါ်က လူတွေက သူတို့ ကို ဆင်းမလာစေချင်လို့ … စိန်တွေကို မရစေချင်လို့ အော်တာလို့ ထင်ပြီး တစ်ဦးသောသူက စိန်လောဘတက်ပြီး ဆင်းလိုက်သွားတယ်။ ပထမဆုံးလူငယ်ရဲ့အသံပျောက်သွားတယ်၊ မြွေပေါက်ခံရလို့ သေသွားတာဖြစ်မှာပေါ့၊ အော်သံမကြားရဘဲ ဆိတ်ငြိမ်နေ တာကိုပဲ တခြားလူတွေက သူတစ်ဦးထဲ စိန်တွေကို ကြိတ်ပြီးယူနေတာလို့ ထင်နေတယ်။ အပေါ်က ကြည့်တော့
လရောင်မှာ တကယ်ပဲ စိန်တွေလို ကျောက်သံပတ္တမြားတွေလို ပြိုးပြိုးပျက် လက်နေတာ
မြင်ရတော့ အော်ပြောသူရဲ့ စကားကို မယုံနိုင်ဘူးပေါ့။
ဒုတိယဆင်းသွားသူကလည်း အောက်ရောက်တော့ တကယ့်မြွေတွေဖြစ်မှန်း သိရတယ်၊ ဒါကြောင့်
ပထမ ဆင်းသွားသူလိုပဲ အပေါ်ကို အော်ပြောတယ်။ “ ဆင်းမလာကြနဲ့ ၊ စိန်တွေမဟုတ်ဘူး၊
မြွေတွေ…” လို့ အော်တယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း အပေါ်က လူတွေက … ဒီကောင်တွေ တို့ ကို
ဝေမျှမပေးချင်တာနဲ့ ကြိတ်ပြီးစိန်တွေကို ယူနေကြပြီလို့ ထင်တယ်။ ဒီလို အထင်နဲ
ဆင်းသူတိုင်းက အောက်ရောက်ရင် အပေါ်က လူတွေကို “ မဆင်း နဲ့ ၊ စိန်တွေမဟုတ်ဘူး၊ မြွေတွေ…မြွေတွေ…” လို့ အော်တယ်။ အော်သူက အော်ပြေပေမဲ့ဆင်းသူကလည်း ဆင်းလိုက်တာပဲ၊ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ
ခရီးသည်အားလုံးဟာ အဆိပ်ပြင်းထန်လှတဲ့ မြွေတွေရဲ့ အစား အမျိုခံရပြီး အသက်ကုန်သွားကြတယ်…တဲ့ ။
ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား၊ ‘ ဃရာဝါသ ကိစ္စမြားမြောင် လူတို့ ဘောင်’ ဆိုတာလေ။ အင်မတန်မှ
ဒုက္ခတွေ များတယ်၊ အိမ်ထောင်ကျပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ တစ်နေ့ ပြီးတစ်နေ့ သားကိစ္စ၊ သမီးကိစ္စ၊ မယားကိစ္စ၊ ယောက္ခမကိစ္စ၊ ဟိုလူ့ ကိစ္စ၊ ဒီလူ့ ကိစ္စ၊ ဟိုအရေးကိစ္စ၊ ဒီအရေးကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်လိုက်တာမှ အသက်ရှင်ခိုက် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်
စကားတစ်ခုရှိတယ်။ လူ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်မှာ အဖြစ်အပျက် သုံးခုရှိတယ်တဲ့၊ မွေးဖွားခြင်း၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ သေခြင်း ဆိုတာပဲတဲ့ ။ မွေးဖွားခဲ့တာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ သေခြင်းတရားနဲ့ ကြုံလာတော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားလာတယ်။ ဘ၀မှာ အသက်ရှင်နေခိုက် နေဖို့ တော့ မေ့ သွားတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပေါ့။ အမှန်က ဘ၀ အသက်ရှင်ခိုက်
နေဖို့ ကို မေ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ နေဖို့ ကို အချိန်မရ ဖြစ်သွားတာ။
သားကိစ္စ၊ မယားကိစ္စ၊ စီးပွားရေး ကြီးပွားရေးကိစ္စ ကိစ္စပေါင်းစုံနဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိ အောင် နေဖို့ အချိန်မရတာပါ။
ဒါကြောင့် ဃရာဝါသဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်သားမွေး အလုပ်ကို မလုပ်ကြနဲ့ ၊ မိန်းမမယူကြနဲ
့ အင်မတန်ဒုက္ခများတယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ပြောခဲ့ ကြတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ … စောစောက တွင်းကြီးထဲဆင်းတဲ့ ပုံပြင်ထဲက အော်ပြောသူတွေလိုပေါ့ဗျာ။ ဆင်းမလာကြနဲ့ လို့ ရှေ့က
အော်ပေမဲ့ နောက်လူကလည်း ဆင်းတာပဲ။ အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ ရှေ့ က လူတွေက အိမ်ထောင်မပြုကြနဲ့ ၊ မိန်းမမယူကြနဲ့ လို့ ပြောပေမဲ့ … နောက်လူတွေ အိမ်ထောင်ပြုကြတာပဲ၊ မိန်းမယူဖြစ်အောင် ယူတော့တာပဲ။ ဒုက္ခတွင်းကြီးအကြောင်း စဉ်အဆက် သတိပေးပြောသူက ပြောပေမဲ့ ခုန်ချသူကလည်း ခုန်ချနေတာပဲ။
တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး စဉ်ဆက် ခုန်ချလျက်ပေါ့ဗျာ…။
သူက ဆက်ပြောပြန်ပါတယ်။ “ ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ ဘာလဲဆိုတော့
သံသရာဆိုတဲ့ရေပြင်ကျယ်ကြီးဟာ ကျယ်ဝန်းလှတဲ့အတွက် ကူးမြောက်ဖို့ ခက်ခဲရတဲ့အထဲ ‘ ၀ဲ ’ ဆိုတာ ရှိသေးတယ်တဲ့ ။ ရေပြင်ကျယ်ကြီးမှာ ရှိနေတဲ့ ဝဲလှည့်နေတဲ့ အထဲရောက်သွားရင် အဲဒီဝဲက လှည့်ပတ်စုတ်ယူ ဆွဲဆောင်သွားတာ ပြင်းထန်လို့ အဲဒီဝဲထဲကနေ ပြန်ထွက်ဖို့ ပေါ်လာဖို့ သိပ်ခက်ခဲတယ်။
မာတုဂါမဆိုတဲ့ မိန်းမဟာ အဲဒီရေပြင်ကျယ်မှာ ရှိတဲ့ ဝဲနဲ့ တူတယ်တဲ့ ဗျ။ အဲဒီမိန်းမရဲ့အချစ်၊ အကြိုက်၊
အမူအနွဲ့ မူယာမာယာထဲရောက်သွားလို့ ကတော့ ယောက်ျားတစ်ဦးအဖို့ ပြန်ပေါ်လာဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ အမယ်… ဒီလိုမာတုဂါမ မိန်းမရဲ့ အဖမ်းအယူခံရပြီး တဏှာရာဂ ၀ဲကြီးထဲ ရောက်ရတာကိုပဲ ယောက်ျားဆိုတဲ့ သူက ဂုဏ်ယူနေ တတ်သေးတယ်။ ငါ့ မှာ မိန်းမတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာရှိလို့ ၊ ငါကတော်တဲ့ တတ်တဲ
့ယောက်ျားဖြစ်လို့ ၊ အစွမ်းအစရှိတဲ့ သူမို့ လို့ မိန်းမတွေက ငါ့ကိုကြိုက်တာ…ဆိုပြီး မိန်းမ၀ဲထဲ ရောက်တာကိုပဲ ဂုဏ်ထူးဝိသေသလို့ ထင်တတ်သေ့းတယ်တဲ့ဗျ၊
အင်း… ရှိစေတော့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ ဃရာဝါသ ၀ဲထဲနစ်မြုပ်ပြီဆိုရင်တော့ ထွက်စရာလမ်းက အခက်သားလား၊ ပြောခဲ့ တဲ့ အတိုင်း သားကျွေးမှု၊ မယားကျွေးမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ရရှိရေးဆိုတဲ့ အမှုကိစ္စတွေနဲ့
လုပ်လိုက်ရတဲ့စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေးတွေ ပြီးနိုင်တယ်ရယ်မရှိဘူး။ ဆုံးနိုင်တယ်ရယ် မရှိဘူး…။”
အထက်ပါ သူ့ စကားတွေကို နားထောင်ရင်းက ကျွန်တော့်ညာဘက်တွင်ထိုင်ရင်း ကျွန်တော့်လိုပဲ နားထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ လူပျိုကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူက လှုပ်ရှားလာပြီး အသံခပ်နိမ့်နိမ့်နဲ့ “ ကျုပ်ကတော့ “တွင်း နက်ကြီးထဲ အတင်းခုန်ချခဲ့ တာပဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး မကျတာလဲ မသိပါဘူးဗျာ။
၀ဲတွေစုပ်ချင်လည်း စုပ်ဆိုပြီး မျှောလိုက်လာတာ ဘယ်ဝဲကမှလည်း ကျုပ်ကိုယ်ကို
ဆွဲယူမသွားဘူး။ အဲဒီအဖြစ်ဟာ ကံကောင်းတာလား၊ ကံဆိုးတာလား … ပြောစမ်းပါအုံး…”
ဟု ကျွန်တော့်ကို ပြောနေပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ ကို ထိုနေ့ က ချက်ချင်း စကားမတုံ့ ပြန်နိုင်ခဲ့ ပါ။ ‘ ၀ဲ ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလှည့်အပတ်၊ အညာ အလှိုင်း၊ အဖြီးအဖြန်းတွေနဲ့ မိန်းမကို ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ‘ ယောက်ျား ’ ကို အလင်္ကာပြုရင်ကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ တွေးနေမိတဲ့
အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဃရာဝါသ ကိစ္စမြားမြောင် လူတို့ ဘောင်ဆိုတဲ့ အတိုင်း များမြောင်လှတဲ့ ပြဿနာတွေကြားမှာ ပြုမိမှား၊ ပြောမိမှားခြင်းတွေနဲ့ ရလိုက်ရတဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ နောင်တတွေအကြောင်း
အတွးဆန့် နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(Perfect မဂ္ဂဇင်း၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈)
Good idea of sharing such this article to us!
Thanks for sharing NandarTheinzan’s philosophy about marriage and life,yes,
it is true that some people are trying to escape from the cage after their marriage ,but
at the same time,others ,trying to come into the cage of marriage without knowing the
troubles of it.In real situation ,some repent that they have married like the people who think of diamonds instead of seeing the snakes in your story.
Whatever it might be,we,humans should take care of everything before we decide sth for our lives.
Thanksamillion for sharing such good philosophy of life and good ideas .
တချို.က စိန်တွင်းထင်လို. ဆင်းကြတာ
တချို.ကြတော.လဲ မြွေတွင်းမှန်း သိရက်ခုန်ဆင်းကြတာဘဲ
ဆေးလိပ်ကြိုက်တဲ့လူ ဆေးလိပ်မကောင်းမှန်းသိတယ်၊ ဖြတ်မရဘူးဆိုတာလိုပေ့ါ
ပုထုဇဉ်ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝစိတ်ကိုက ရှုပ်တော့ ရှုပ်မှပျော်တာပေ့ါ
အရိယာသူတော်ကောင်း(ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေများ)ကျတော့ လူ့ဘ၀စည်းစိမ်တွေကို မစင်၊ အညှီအဟောက်လို ရွံရှာသွားကြတယ်